महिलामा सन्तान नहुने कारणहरु
– वीज ग्रन्थीको खराबीले गर्दा स्त्रीबीज(अण्ड)ननिस्कनु । – वीजवाहिनी नलीहरुमा केही अवरोध हुनु । यस्तो भएमा अपरेशनबाट ठीक हुनसक्छ । – गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुनु । – गर्भाशय ज्यादै सानो हुनु अथवा दुई...
रिसका किसिम कस्ता हुन्छन ?
डा. कपिलदेव उपाध्याय (१) कडा रिस यस्तो रिस धेरै लामो समयदेखि हुन्छ र आफ्नो जीन्दगीदेखि नै रिस उठेको हुन्छ र अरु सबै प्रति पनि रिस उठिरहन्छ । (२) आबेस अचानक, एक्कासी रिस उठ्छ, तथा...
८० प्रतिशत नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक
काठमाडौं । झन्डै ८० प्रतिशत नेपालीलाई कुनै न कुनै बेला ग्यास्ट्रिक लागेको अनुमान छ । सबै समुदाय र उमेर समूहका मानिस ग्यास्ट्रिकबाट पीडित भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मेडिकल भाषामा ‘ग्यास्ट्राइटिस’ भनेर चिनिने यो रोगलाई बोलीचालीको...
१) भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । यसबाट विभिन्न विकृतिहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । हप्ताको १ / २ देखि १ किलो ग्रामभन्दा बढी तौल घटाउनु उपयुक्त हुँदैन । २) उसिनेको खाना...
‘राती भयो कि कोही आएर मेरो अनुहारमा मुक्कैमुक्काले हान्छ,’ दुई महिना अघि मकहाँ जचाउँन आएका २७ वर्षिय एक युवाले अनौठो समस्या सुनाए । उनको अनुहार भरी नै निल डाम र घाउ थियो । उनी...
वीरमा सिटिस्क्यान बिग्रदा बिरामीलाई सास्ती
काठमाडौं, २४ चैत । लामो समयदेखि टाउको दुख्ने समस्या झेलिरहेकी बाराकी खैरेनी थारुले अस्पताल पुगेर पनि समयमै उपचार पाएकी छैनन ।...
अप्रेशन गर्न बेहोस बनाउँदा बिरामीको मृत्यु, झापामा तनाव
भद्रपुर, २७ चैत । अप्रेशनका लागि बेहोस पार्ने क्रममा एक जना बिरामीको मृत्यु भएपछि झापाको भद्रपुरस्थित ओम साई पाथीभरा अस्पतालमा तनाव भएको छ । भद्रपुर १५ स्थित हस्पिटलमोडकी ५० वर्षीया जमुना ।...